Amerika Latina · Febroary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Febroary, 2013
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Febroary, 2013
Bolivia 27 Febroary 2013
Bolivia 26 Febroary 2013
Kolombia 26 Febroary 2013
Karaiba 25 Febroary 2013
Maxima Zorreguieta, Ilay Arzantina Ho Lasa Mpanjakavavy Hitondra An'i Nederlandy
Arzantina 23 Febroary 2013
Anton-dresaka fankalaza sy bitsika ho an'ny Arzantina ny fialàn'ny Mpanjakavavin'i Nederlandy Beatrix teo amin'ny toeram-boninahitra, ary koa satria ho lasa Mpanjakan'ny tanin'i Nederlandy i Máxima Zorreguieta.
Brezila 23 Febroary 2013
Nahazo fanohanana goavana tamin'ilay tolona natao hanoherana ny fanalàna azy ireo tamin'ny taniny ilay fanentanana faobe tanaty aterineto izay valin'ilay antso nataon'ireo vazimba teratany ao Guaraní-Kaiowá tao Pyelito Kue ao Mato Grosso do Sul dia. Ny faran'ny volana Oktobra 2012 lasa teo,nanapa-kevitra ny fitsarana ao Brazila ny hanafoana ilay didy fanesoràna azy ireo amin'ny taniny. Na dia izany aza anefa,mbola mitohy ny tolona mandra-panamarika mazava tsara ny faritry ny tanin'izy ireo.
Fifidianana Tao Ekoatera: Voafidy Ho Filoha Indray i Rafael Correa
Ekoatora 20 Febroary 2013
Tamin'ny Alahady 17 Febroary 2013, olom-pirenena Ekoateriana 11.6 tapitrisa no nandeha nandatsa-bato, nanatontosa ny zony hifidy. Nofidiana tamin'izany andro izany, ny filoham-pirenena sy ny filoha lefitra, solontena 137 avy ao amin'ny Antenimieram-pirenena sy solontena dimy avy ao amin'ny Antenimiera Andean. Tsy nahitana olana ny fizotry ny fifidianana izay nanomboka tamin'ny...
Lahatsary momba ny “One Billion Rising” Hetsika Manerantany miady ho an'ny Zon'ny Vehivavy
Afganistana 20 Febroary 2013
Vehivavy iray ao anatin'ny telo no iharan'ny herisetra amin'ny fiainany. Tamin'ny 14 Febroary 2013, olona amanarivony manerantany no nanao fihetsiketsehana nanohitra ireo herisetra andavanandro tamin'ny alalan'ny dihy-fihetsika mirindra, hetsika artistika sy maro hafa.
Nampanotany Tena ny Eran'ny Aterineto Ny Tweet Mifono Hevi-Dalin'ilay Politisiana Tao Arzantina
Arzantina 18 Febroary 2013
Nisioka tambatarehimarika misitery tao amin'ny kaonty Twitter-ny ny filohan'ny Antoko Sosialista tany Arzantina sady efa nanao kandidà ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany indrindra teo, ny Dr. Hermes Binner. Efa voakosoka ilay tweet (sioka), saingy namoaka ny sarin'ilay hafatra ny mpampita vaovao tao an-toerana, tahaka ny Infobae [en]: Un tipeo sin sentido, sólo...